Nzira yekuti uve stylist?
Mutambo unokwezva kwete vakadzi bedzi, asiwo varume. Kunzwa chimiro chekusika, chido chisingachinjiki chekugadzira chakanaka mumunda wakasimwa, chinoramba chiripo kuti uwane ruzivo uye enda kune chinangwa! Asi humwe ruzivo haruna kukwana kuva "mhizha", nokuti kunaka kunofanira kunzwika. Chii chaunoda kuva stylist?
Nzira yekuti uve muchengeti akanaka?
Munhu anofungidzirwa ari kushanda mukusika chifananidzo, uye basa iri rinonyanya kudiwa mukanaka salon. Anoshanda mumitambo yakasiyana-siyana yeTV, zviratidzo zvefashoni, anobatanidzwa mukugadzirira kwemajeri ezvifananidzo nemamwe mapurogiramu. Zvinonyanya kukosha kuti munhu akadaro ave nerunyanzvi rwekunakidza uye nzira yekusika yekushanda. Kuva muchengeti wepamusoro-soro kunobatsira kuziva nhoroondo yemafashoni , zvinyorwa zvekuveura misoro nekugadzira, ruzivo rwekwakabva kuberekwa kwechifananidzo. Iwe hausi kuzova nyanzvi yakanaka paunodzidza pamba, izvo zvinoreva-sarudza yunivhesiti yakanaka kana zvidzidzo.
Munhu anoyevedza, ane chinangwa chikuru chekugadzira mufananidzo, anonzi mufananidzo wemufananidzo.
Nzira yekuti uve stylist-image-maker?
Pasina unyanzvi hwakadaro, hakuna imwe "nyeredzi inokura" inogona kuzviita. Chaizvoizvo, uyu unhu hugadziri, hunofanirwa pakuberekwa kwechifananidzo chisingakanganwiki. Kuumba unhu hunofadza, mufananidzo unoshanda muboka guru: cosmetologists, psychologists, vabati vemicheka nevashandi vefashoni. Zvakajeka kuti nyanzvi yakadai inofanira kunge yakasvibiswa uye inoramba iine nguva. Ndicho mufananidzo wezvigadzirwa unogadzira mufananidzo, kufunga nezvekupedzisira kwezvinhu zvose: kusemwe, sutu, manzwiro, kutaura. Kune unyanzvi akadaro kunyange vezvematongerwe enyika vanoda kuve nehanya nevateereri vavo kero. Zvechokwadi, vabati vehodzi-muumbi anoshanda basa guru mukuzvarwa kwechifananidzo. Zvikamu chete zvinotakura kusvika kune zvikomo munzvimbo ino pasina dzidzo inokosha. Vanhu vazhinji vanoda kudzidza ruzivo rwakakosha mune zvidzidzo, uye kunyange zviri nani-kuwana dhiploma mune yunivhesiti yakakwirira.
Nzira yekuti uve stylist-vabati vebvudzi?
Iyi-yepamusoro-soro yevashandi vemucheka, nokuti pano haufaniri kungoziva nyanzvi nemakumbo, asi muveki. Ndiyo "museki shure kumashure" iyo inobatsira kuumba unyanzvi, uye izvi hazvirevi "shongwe inoshamisa" pamusoro. Muchengeti-nyanzvi anogona kushandura tarenda chete mumvuri wemvere, kuitira kuti kutonhora uye chiso chinosuruvara chave chawana charisma yakajeka. Nzira yekusika uye kukura kusingagumi mumwero wako ndiyo nheyo dzinokosha dzezver-after specialist. Kuva neunyanzvi hwekugadzira bvudzi, iwe unodawo kudzidza kuti ungatora sei zvishoma, kunzwisisa mavara nemumvuri, une pfungwa yemarudzi akasiyana-siyana mavara ekuonekwa. Zvose izvi ruzivo runokwanisika kugamuchira, kuzviita dzidzo, chinhu chikuru ndechokuva nechido chikuru uye kuva nechinangwa.
Nzira yekuti uve stylist-make-up muimbi?
Uye heino imwe basa rekusika iro "rinotarira chiso" mumufananidzo. Zvakanaka kuita maitiro asina kukwana kuti uzviratidze kuti iwe uri muiti wezvigadzirwa. Zvakakosha kuva nezivo yakadzika munyaya dzakadai se "ruvara", "kuumbwa". Iwe unofanirwa kunge uine ruzivo rwepfungwa, nekuti iwe uchava pedyo (muchirevo chezwi rose) kushanda nevanhu.
Uye usakanganwa chokwadi chokuti iwe wakagadzikana mumushudziri wevadzidzisi, iwe haunzwisisike kuti uonekwe nevanokudzwa zvikuru. Zvakakosha kutarisa ma-hangout, apo vamiririri vakakurumbira vemabasa aya vanoungana, vanopinda misangano yakasiyana-siyana nemisangano uye vanogara vachiita basa pachavo.
Chii chinosanganiswa nemuvara wemuvara mune zvipfeko?
Photoshoot mumutauro we "50 shades of gray"
Nechokupfekedza chikwata chekunamatira - sarudzo yemifananidzo yakanakisisa yezviitiko zvose
Svondo yakasungirirwa vakadzi vane mafuta pamhemberero
Kuenda kwevasikana nokuda kwekuputika mufananidzo
Nechokupfekedza chikafu cheganda chigadziko?
Photoshoot yechando fhata
Akatambanudza shangu - chii chaungaita?
Nechii chingapfeke mabhegi?
Studio studio shoots yavasikana
Ndezvipi zvakanakira kupfeka musikana?
Vanyori vanoyevedza zvikuru 2013
Mwananyamai waamai: Brooklyn Beckham akaita tattoo mukukudza amai vake vaanoda
Ndinogona here kutora pamuviri pazuva rekutenda?
Vira yeDacha ane maoko
Ndiani Justin Bieber anosangana naye?
Cervical murvix - zvinokonzera
Mazano kune vakadzi vane pamuviri
Kukura kwekukurumidzira ndicho chikonzero
A loggia pamwe chete nekamuri
Dystrophy ye retina
Mitauro yeArbors - iyo inonyanya kufarirwa uye yakakodzera
Cupcakes nemukaka wakabikwa mukaka
Ndeapi kupfeka kacheche pamba?
Nzira yekubvisa tsvina kubva pakudengenyeka nokukurumidza nekubudirira?
Stratification yezvipikiri - chikonzero nekurapa
Nzira yekukurumidza kuomesa mapiritsi echipikiri?